China YF-H-802-2 အနက်ရောင်ဘူဖေးစားပွဲ ၂ တံခါးနှင့်အံဆွဲ ၃ ခုထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yifan
အင်္ဂါရပ်များ စင်, အံဆွဲ, တံခါး
ပုံစံ ဇိမ်ခံ & ခေတ်သစ်
ပစ္စည်း High Gloss MDF ဘုတ် + Tempered glass + overgild stainless steel
EXW စျေးနှုန်း - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၅ - ၉,၉၉၉ / တစ်ယူနစ် (ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြောဆိုပါ)
Min.Order အရေအတွက် - ၃၀ ပြား
အသေးစိတ်ကိုသင်၏မျက်စိကိုဖမ်းစားရန်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပရိဘောဂအပိုင်းအစတစ်ခုဖန်တီးရန်ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းဆွဲသူသည်ပြီးပြည့်စုံသောအသွင်အပြင်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဒီဇိုင်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသုတ်လိမ်းပြီးပြုပြင်ခဲ့သည်။ သူ၏အလုပ်ကိုပြီးဆုံးရန်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့သည်။ ရလဒ်သည်လက်ရာမြောက်ပြီးနောက်ဆုံးအသေးစိတ်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအခွင့်အလမ်းမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ tapered၊ လှည့်ထားသောခြေထောက်များနှင့် push-to-open လုပ်ဆောင်ချက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းကိုထည့်သွင်းပေးသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအပိုင်းအစအဖြစ်, sideboard လည်းမျက်စိဖမ်းမိ။ အထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းကိုနှစ်သက်သောသူများသည် rounded finishes ကဲ့သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအထူးနှစ်သက်ကြသည်။
စင်ကြယ်သောအဖြူရောင်ယွန်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားသောသပိတ်ပင်ဖြင့်အသေကောင်နှင့်ရှေ့မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သောဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာဘေးဘောင်ကို ၄၀၀ စင်တီမီတာမှခန့်မှန်းအထိအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်ခေါက်ဆွဲများ၊ တံခါးများနှင့်ခေါက်တံခါးများနောက်ကွယ်ရှိအံဆွဲများ၊
ပုံစံ - ဇိမ်ခံ & ခေတ်မီလှပသော
ပစ္စည်း - ဘောင်: သံမဏိသံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရွှေရောင်၊ ထိပ်များ - MDF၊ မှန်ဖန်ခွက် - ရွှေရောင်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောစုပ်ယူဘုတ် (ပျက်စီးမှုနှင့်ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အစိုဓာတ်နှင့်အပူချိန်မြင့်မားခြင်း) ။ လှလှပပ
ယခု! လွယ်ကူသော modular စနစ်သည်အလွန့်အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသည်။ အဖြူရောင်ယွန်းအရောင်ဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်ဘေးဘောင်ကိုခြေထောက်ပေါ်တွင် ကပ်၍ ခင်းနိုင်သည်၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့တင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်နံရံပေါ်တွင်တပ်နိုင်သည်။ အရာဝတ္ထုများကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ထားရန်လွယ်ကူသည်၊ သင်၏ပစ္စည်းများသည်အံဆွဲများသို့မဟုတ်တံခါးပေါက်များနောက်တွင်အိမ်တစ်လုံးရှာတွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အံဆွဲ ၆ ခုတပ်ဆင်ထားသည်မှာထမင်းစားခန်းနှင့်အိပ်ခန်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်နှင့်မည်သည့်အရောင်နှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုသာသင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ high-gloss Blck? ဒါမှမဟုတ်မဖြူဖြူလေးလား။
ရှေ့သို့ YF-H-802 မီးဖိုချောင်အတွက်ခေတ်မီကပ်ဘုတ်ပြားပါ ၀ င်သည့်ဖန်သားဖန်သားပြင်
နောက်တစ်ခု: YF-H-803 ကြီးမားသောဘူဖေးစားပွဲ living ည့်ခန်းအစုံ
YF-H-805 အဆင့်မြင့်အီတလီစောင်ချုပ်ဒီဇိုင်းနာ ​​Marb ...
YF-H-801 ဇိမ်ခံမီးဖိုချောင်သိုလှောင်ဘိုက်ဘောင်ခ ...
YF-H-802 မျက်မှန်ဖန်သားပြင် tabletopm ခေတ်မီ sidebo ...
YF-H-807 ခေတ်သစ်အီတလီယွန်းဒီဇိုင်း ...
YF-H-804 ရွှေရောင် Leaf Wave မျက်နှာစာဘတ်ဖတ်ဘေးဘောင်